Uyisesha kanjani i-PDF | Amagajethi Ezindaba
Isithombe sendawo yokubeka uLaura Torres | 12/05/2022 11:21 | General, Software
Ingabe udinga ukucinga igama ku-PDF ende kodwa awazi ukuthi ulenze kanjani? Khohlwa indlela eyisisekelo yokwenza ngokwakho, yokuhamba ikhasi nekhasi uze uthole igama, kunendlela esheshayo nelula yokusesha i-PDF.
Ngakho-ke, kulesi sihloko sizochaza isinyathelo ngesinyathelo indlela yokusesha i-PDF ngesibonelo ukuze ungabi nenkinga yokuthola imigomo kumafayela analesi sandiso.
Kusukela yaba ifomethi evulekile, imibhalo ye-PDF isivame kakhulu ngoba gcina ubuqotho bomklamo wakho kungakhathaliseki ukuthi iyiphi idivayisi ebukwa kuyo: ikhompuyutha, i-smartphone, ithebhulethi, njll.
Kwesinye isikhathi udinga ukucinga igama kudokhumenti ye-PDF ukuze uqinisekise iqiniso, uthole imininingwane ebalulekile, noma nje ngenxa yelukuluku. Ngenhlanhla, lokhu ukusebenza okusheshayo nokulula.
Ukusesha amagama ku-PDF, sizosebenzisa uhlelo olusemthethweni lwe-Adobe, inkampani eyasungula ifomethi ye-PDF. I-Adobe Acrobat Reader DC iwuhlelo lwamahhala, oluhlanganisa injini yokusesha ephumelelayo, futhi ingeyeSpanishi, okwenza izinto zibe lula kithi.
1 Ngaphambi kokuthi uqale: Landa uhlelo
1.1 Isinyathelo sokuqala: Uyisesha kanjani i-PDF yegama noma amagama.
1.2 Isinyathelo sesibili: ukusesha okuqondile
2 Thola umbhalo kumadokhumenti e-PDF amaningi
2.1 Sesha kumafayela amaningi ngesikhathi esisodwa: izinyathelo okufanele uzilandele
3 Ngingayibuyekeza futhi ngiyilondoloze kanjani imiphumela yosesho?
Ngaphambi kokuthi uqale: Landa uhlelo
Uma ungenalo uhlelo olufakiwe olufunda i-PDF, ungalanda I-Acrobat Reader DC kusuka kuwebhusayithi yakho. Qaphela, ngoba ngokuzenzakalelayo iphinde ilande futhi ifake i-antivirus ye-McAffee. Uma ungenayo intshisekelo, yekisa ukumaka le nketho.
Uma uhlelo selufakiwe, yiya ku imenyu Faka kungobo yomlando bese uvula i-PDF lapho ufuna ukucinga khona. Isikhathi esiningi, ngenxa yokucushwa kwesistimu, ifayela lizovuleka ngokuzenzakalelayo nge-Acrobat Reader DC uma uchofoza idokhumenti.
Isinyathelo sokuqala: Uyisesha kanjani i-PDF yegama noma amagama.
Okulandelayo, udinga ukuya kumenyu ephezulu Hlela bese uchofoza inketho Ukucinga eduze kophawu lwezibonakude. Enye indlela esheshayo ukusebenzisa imiyalo yekhibhodi uma uthanda:
cindezela imiyalo I-CTRL + F uma usebenzisa iWindows noma I-CMD + F uma usebenzisa i-Mac. Iwindi lokusesha lizovuleka lapho ungathayipha khona igama ofuna ukulicinga. Ukuze ukhumbule lo myalo, ungacabanga ngegama lokusesha lesiNgisi elithi: “thola”, ngakho uhlamvu lokuqala lwegama yilona oluhambisana ne-CTRL.
Isinyathelo sesibili: ukusesha okuqondile
Ukuze uthole ukusesha okuningiliziwe, cindezela I-CTRL + Shift + F ku-Windows noma CMD + Shift + F ku-Mac. Lokhu kuzovula ifayela le- ukusesha okuthuthukile:
*"Shift" ibhekisela kukhiye owusebenzisayo ukuze uthayiphe uhlamvu olulodwa olukhulu, oluhlanganisa isithonjana somcibisholo oya phezulu. Ukhiye ongaphezu nje kuka-Ctrl.
Lapha ungasesha wonke amadokhumenti e-PDF kufolda ethile, hhayi ifolda yamanje kuphela. Ungasesha ngisho amagama aphelele, amabhukumaka, namazwana. Futhi, kukhona ibhokisi likaqhwishi elibonisa ukuthi ufuna ukufanisa osonhlamvukazi nabancane.
Thola umbhalo kumadokhumenti e-PDF amaningi
I-Acrobat Adobe PDF iqhubekela phambili, ungakwazi ukusesha amadokhumenti amaningi ngesikhathi esisodwa!. Iwindi lokusesha likuvumela ukuthi useshe amagama kumadokhumenti e-PDF amaningi ngesikhathi esisodwa. Isibonelo, ungasesha wonke amadokhumenti e-PDF noma uvule Amaphothifoliyo e-PDF endaweni ethile. Kufanele ucabangele ukuthi uma imibhalo ibethelwe (izinyathelo zokuphepha zisetshenzisiwe), azikwazi ukufakwa ekusesheni. Ngakho-ke, kuzodingeka uvule le mibhalo ngayinye ngayinye ukuze useshe ifayela ngalinye ngokwalo. Nokho, amadokhumenti abhalwe ngekhodi njenge-Adobe Digital Editions ahlukile kulo mthetho futhi angafakwa eqenjini lamadokhumenti ongaseshwa. Ngemva kwalokhu siya lapho.
Sesha kumafayela amaningi ngesikhathi esisodwa: izinyathelo okufanele uzilandele
Vula i-Acrobat kudeskithophu (hhayi kusiphequluli sewebhu).
Enza esinye salezi zenzo ezilandelayo.- Kubha yamathuluzi yosesho, thayipha umbhalo ofuna ukuwucinga, bese ukhetha Vula ukusesha okuphelele ye-Acrobat kumenyu ye-pop-up.- ebhokisini lokusesha, thayipha umbhalo ofuna ukuwucinga.
Kuleli windi, khetha wonke amadokhumenti e-PDF. Kumenyu ye-pop-up engezansi nje kwenketho, khetha cinga lapho.
Khetha indawo kukhompuyutha yakho noma kunethiwekhi bese uchofoza ukwamukela.
Ukuze ucacise imibandela yokusesha eyengeziwechofoza Khombisa izinketho eziphambili futhi ucacise izinketho ezifanele.
Njengethiphu, ngesikhathi sokusesha, ungachofoza emiphumeleni noma usebenzise imiyalo yekhibhodi ukuze uskrole emiphumeleni ngaphandle kokuphazamisa ukusesha. Uma uchofoza inkinobho Yima ngaphansi kwebha yokuqhubeka, ukusesha kukhanseliwe futhi imiphumela ikhawulelwe ezenzakalweni ezitholiwe kuze kube manje. Iwindi lokusesha alivali futhi uhlu lwemiphumela alusulwa. Ngakho-ke, ukuze ubone imiphumela eyengeziwe, kufanele uqalise usesho olusha.
Ngingayibuyekeza futhi ngiyilondoloze kanjani imiphumela yosesho?
Ngemva kokwenza ukusesha efasiteleni lokusesha, imiphumela iboniswa ngokulandelana kwekhasi, iphinde ihlanganiswe ngaphansi kwegama ledokhumenti ngayinye eseshiwe. Into ngayinye ohlwini ihlanganisa igama lokuqukethwe (uma likhona) kanye nesithonjana esibonisa uhlobo lwesenzeko.
Gxumela esimweni esithile emiphumeleni yosesho. Kungenziwa kuphela kuma-PDF angawodwana.
- Nweba imiphumela yosesho, uma kunesidingo. Bese ukhetha isibonelo emiphumeleni ukuze uyibuke ku-PDF.
- Ukuze ubone ezinye izimo, chofoza kwesinye isibonelo semiphumela.
Hlunga izimo emiphumeleni yosesho. Khetha inketho yemenyu Ukuhleleka ngaphansi kwewindi lokusesha. Ungakwazi ukuhlunga imiphumela ngokuhambisana, idethi elungisiwe, igama lefayela, noma indawo.
Londoloza imiphumela yosesho. Ungagcina imiphumela yakho yosesho njengefayela le-PDF noma le-CSV. Ifayela le-CSV lenziwe ngetafula, ngakho-ke ukuze ulivule kufanele ulenze ngohlelo lwe-Excel. Ukuze uqedele, chofoza isithonjana idiski bese ukhetha ukulondoloza imiphumela njenge-PDF noma ulondoloze imiphumela njenge-CSV.
Ngethemba ukuthi lolu lwazi lube usizo kuwe, njengoba ubona, ukuthola amagama ku-PDF kuwumsebenzi olula kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Isesha nge-PDF
Intengo nosuku lokukhishwa kwe-Doogee S98 Pro sekwaziwa